UKolisi uveza isizathu esenze wajoyina iSharks
U-EDUARD Coetzee oyisikhulu esiphezulu kwiSharks, noSiya Kolisi ojoyine leli qembu laseThekwini Isithombe: SHARKS TWITTER
Nduduzo Dladla | February 18, 2021
UKAPUTENI wamaBhokobhoko uSiya Kolisi, uveze isizathu esimenze walaxaza iWestern Province, wajoyina iCell C Sharks. UKolisi wethulwe ngokusemthethweni yiSharks izolo, ngemuva kweminyaka engu-11 edlala eKapa.
Uthe isizathu esimenze wajoyina iSharks, wukuthi ubesefuna ukukhula, hhayi kuphela enkundleni kodwa nangaphandle kwenkundla.
"ISharks iyiqembu elibukeka linekusasa eliqhakazile. Indlela iqembu eliphethwe ngayo, uhlobo lwabadlali elinabo kuveza ngokusobala ukuthi ikusasa liqhakazile. Ngingumuntu ohlale efuna ukugqama nokuphumelela empilweni. Lokhu ngifuna kwenzeke enkundleni nangaphandle kwenkundla. Ukuza lapha kwiSharks ngikubona kuzongenza ngisondele emaphusheni ami. Sijabule kakhulu nabathandiweyo bami ngalolu hambo olusha esiluthathayo," kusho uKolisi owethulwe yisikhulu esiphezulu kwiSharks, u-Eduard Coetzee.
Ngokusho kukaCoetzee, ukufika komdlali osezingeni eliphezulu njengoKolisi kwiSharks, kuzosiza abadlali abasebancane ngoba ungumbele ogwansile.
"Sijabule ngokufika kukaKolisi nomndeni wakhe kwiSharks. UKolisi uzosisiza kakhulu ekuthuthukiseleni abadlali bethu abancane. Uyiqhawe labo, futhi umsebenzi wakhe uyawuhlonipha. Lapha koShaka, siyayazisa eyokunakekelana hhayi kuphela enkundleni kodwa nangaphandle kwenkundla. Angikungabazi ukuthi uzongena athi khaxa eqenjini ngokushesha," kusho lesi sikhulu.
UKolisi ubesedlale amahlandla angu-118 kwiProvince. Uthathe izintambo zokuba wukaputeni kwiProvince ngo-2017, kwathi ngo-2018 wamenyezelwa njengokaputeni weqembu lesizwe amaBhokobhoko. Sekuwumlando ukuthi ngo-2019, uKolisi neqembu lesizwe banqobe isicoco seNdebe yoMhlaba, ngaphansi kobuholi bukaRassie Erasmus obengumqeqeshi.
Kungenzeka ukuthi uKolisi bese kunguyena oshodayo kwiSharks ekutheni inqobe isicoco seVodacom Super Rugby, njengoba ingakaze isinqobe lesi sicoco selokhu kwathi nhlo. Isifike kowamanqamu amahlandla amane, ifike yehluhlwe.